Jikọọ - IntegritySyndicate.com
Mbido gbasara Anyị jikọọ
Sonyere ọgbakọ Ndị Kraịst anyị
Sonyere anyị na nghọtahie!
Soro na YouTube, facebook ma ọ bụ Twitter
WayOfChrist. okwukwe bụ ọgbakọ ọgbakọ Ndị Kraịst ọhụrụ ewepụtara ọhụrụ nke Integrity Syndicate. Weebụsaịtị a na -elekọta mmadụ gụnyere profaịlụ otu, otu, nzukọ, na atụmatụ ndị ọzọ maka imekọrịta na isoro ndị obodo na ozi ahụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ya na -ahụ saịtị ahụ maka ọha, ịdenye aha dị mkpa maka mmekọrịta obodo.
Ịdebanye aha dị ka onye ọrụ na -enye uru ndị a:
Soro ma kparịta ụka n'otu dị maka mkparịta ụka mepere emepe ma ọ bụ mkparịta ụka dabere na isiokwu
Biputere mmelite gụnyere hyperlinks, onyonyo na dọkụmentị na profaịlụ gị ma ọ bụ na otu
Hụ ma sonye n'otu dị iche iche (maka naanị ndị otu) ka ha kpaa maka isiokwu ndị nwere mmetụta karịa
Jụọ ma zaa ajụjụ na nnọkọ - ntọala ihe ọmụma obodo
Mepụta profaịlụ nke ndị otu ndị ọzọ nwere ike ịhụ
Hụ ma chọọ profaịlụ ndị otu ndị ọzọ
Soro ndị otu ndị ọzọ ma ọ bụ ndị isi ozi
Ziga ndị otu ndị ọzọ ma ọ bụ ndị isi ozi
Nweta ọkwa email ka remain mara maka ozi ahụ
A ga -atụkwasị ọrụ ndị ọzọ n'ọdịnihu gụnyere ndenye aha, nkuzi n'ịntanetị, nbudata dijitalụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
A na -agba gị ume isonye na obodo na -eto eto! Maka mweghachi nke 1st Century Christianity!
WayOfChrist.faith - Ndị otu ọgbakọ Ndị Kraịst na -eguzosi ike n'ezi ihe
Discord na -enye ederede, olu na nkata vidiyo. Ịchọrọ inwe mkparịta ụka na -arụ ọrụ, bịa ebe a.
Email Kpọtụrụ: [email protected]